ယဉ်ကျေးမှု Shock - အမေရိကရှိအသက်ရချိန်ညှိ | USAHello | USAHello
သငျသညျသစ်တစ်ခုယဉ်ကျေးမှုကိုထိန်းညှိအဖြစ်, သင်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေခံစားရဘယ်မှာကွဲပြားခြားနားသောကာလကိုဖြတ်သန်းသွားစေခြင်းငှါ. Part of the process is known as “ယဉ်ကျေးမှုထိတ်လန့်။” Understanding about culture shock will help you accept the feelings and make it easier to adjust.
The picture above shows how people feel as they go through the stages of cultural adjustment. ပိုပြီးအသေးစိတ်အတွက်အဆင့်ဆင့်ကိုကြည့်ကြရအောင်.
သငျသညျပထမဦးဆုံး USA တွင်ရောက်ရှိမည်လိုက်တဲ့အခါ, သငျသညျမင်ျဂလာနှင့်စိတ်လှုပ်ရှားခံစားရပေမည်. သင်သည်သင်၏အသစ်သောအသက်တာ၌အဘယ်သို့ဖြစ်မည်ကိုများအတွက်ရည်မှန်းချက်များနှင့်မျှော်လင့်ချက်များအများကြီးရှိစေခြင်းငှါ. သငျသညျဖြစ်ကောင်းအချိန်ကြာမြင့်စွာမရေိကလာရန်စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ကြ. You may have heard lots of great things about the USA. သင်လျင်မြန်စွာကောင်းတစ်ဦးအလုပ်ရလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ထား, ကောင်းတဲ့အိမ်သူအိမ်သားများ, and earn English. သငျသညျအာရုံကြောဖြစ်နိုင်သည်, သင်မူကား, အမေရိကရှိလူအပေါင်းတို့သည်အသစ်သောအရာမျှော်လင့်.
ဤအချိန်ကာလအတွင်း, သငျသညျစိတ်ဆိုးခြင်းနှင့်ဝမ်းနည်းခံစားရစတင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျအမျက်ထွက်ခံစားရစတင်စေခြင်းငှါ. သငျသညျကြောက်တယ်ခံစားရသို့မဟုတ်အမှန်တကယ်သင့်အိမ်တိုင်းပြည်လက်လွတ်စေခြင်းငှါ,.
သငျသညျအင်္ဂလိပ်စကားမပြောတတ်ကြဘူးဆိုရငျ, ယဉ်ကျေးမှုစျေးမှာအဆင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာရှည်နိုင်ပါတယ်. ဤအချိန်ကာလအတွင်းသင်ကူညီ, သင်သည်သင်၏ယဉ်ကျေးမှုအခြားဒုက္ခသည်များနှင့်တွေ့ဆုံရန်ဖို့ကြိုးစားနှင့်သင့်ရိုးရာအစားအစာရောင်းချကြောင်းစတိုးဆိုင်ကိုရှာဖွေသင့်တယ်.
သငျသညျအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုကြောက်မက်ဘွယ်သောသည်ဟုမထင်စတင်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်သင်အမေရိကားအကြောင်းကိုဘာမှမကြိုက်ဘူးကြောင်း. အခုအသစ်ယဉ်ကျေးမှုတှငျနထေိုငျလူအားလုံးတစ်ဘုံအဆင့်သည်ကိုသိမှတ် ကျေးဇူးပြု.. နောက်ဆုံးမှာ, သငျသညျလာမည့်အဆင့်မှရွှေ့မည်. သင်တို့အပေါ်မှာမရွှေ့ဘူးဆိုရင်, သငျတို့သနေဆဲဝမ်းနည်းသို့မဟုတ်အမျက်ထွက်ခံစားရတယ်, you may need some extra help, and you should talk to your caseworker about it. ဒုက္ခသည်တစ်ဦးအဖြစ်, သင်သည်များစွာသောခဲယဉ်းသောအရာတို့ကိုတဆင့်ပါပြီကြောင့်အပိုအကူအညီလိုမှအားလုံးမှန်သည်.
အခြို့သောအချိန်ပြီးနောက်, you will hopefully move past the culture shock phase and you will begin to adjust to life in the USA. You start to understand the reality of what life will be like inanew country. You may decide to takealow-paying job because it will help your family. သငျသညျအင်္ဂလိပ်သင်ယူဖို့စတင်မည်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းတဲ့လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ရှိသည်ဖို့စတင်နေကြသည်. ဘဝကိုပုံမှန်ခံစားရရန်စတင်.
One common challenge during this time period is that your children may be adjusting to life in the USA more quickly than you are. ဤသည်အလွန်ဘုံဖြစ်ပါသည်, သင်မူကားသင်၏သားသမီးသင့်အိမ်ယဉ်ကျေးမှုချိတ်ဆက်နေဖို့ကူညီပေးဖို့လုပျနိုငျသောအရာတို့ကိုရှိပါတယ်.
ဒါကယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းမှု၏နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်. ဤအချိန်အတောအတွင်း, အမေရိကားအိမ်ကတူခံစားရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်. သင်ဒီမှာပိုင်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရရန်စတင်ပါလိမ့်မည်. သငျသညျယခုသင့်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းများနှင့်အတူအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှု၏အစိတ်အပိုင်းရောမွှေလို့ရပါတယ်. သင်အမှန်တကယ်အမေရိကန်နှင့်အမှုအရာနှင့် ပတ်သက်. တူသောသင်အမှန်တကယ်သင့်အိမ်တိုင်းပြည်ကနေတန်ဖိုးထားသောအရာတို့ကိုရှိကောင်းရှိနိုင်ပါသည်. သင်အလွယ်တကူအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌သင်တို့၏နေ့စဉ်ဘဝလမ်းညွှန်နိုင်ပါတယ်. သငျသညျဖြစ်ကောင်းလည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူနှင့်ဒုက္ခသည်များနေသောအချို့သောအမေရိကန်မိတ်ဆွေများနှင့်သူငယ်ချင်းအချို့ရှိတယ်. အခုဆိုရင်သင့်ရဲ့ပညာရေးတိုးတက်စေရန်ဆက်လက်ကာလဖြစ်၏. You may choose to become an American citizen.